မျက်စိလေ့ကျင့်မှု - မျက်လုံးပြုစုစောင့်ရှောက်မှု Plus အား APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » မျက်စိလေ့ကျင့်မှု - မျက်လုံးပြုစုစောင့်ရှောက်မှု Plus အား
မျက်စိလေ့ကျင့်မှု - မျက်လုံးပြုစုစောင့်ရှောက်မှု Plus အား APK ကို
သင်၏မျက်စိ Give5မိနစ်တစ်နေ့, သင်၏ life.You ၏ကျန်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ရှောက်မှုအားလုံးကိုလမ်းအားကစားရုံသို့ သွား. ကြည့်ရှု, သင့်မျက်စိစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အိပ်ရာပေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သင်အလိုရှိသည့်အခါတိုင်း, ငါတို့မျက်လုံး Plus အားတီထွင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်သင်သွားလေရာရာ၌သင်သည်သင်၏မျက်စိကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရိုးရိုးတစ်တင်းမာနေသောနေ့ရက်ပြီးနောက်သင်၏မျက်စိအပန်းဖြေသို့မဟုတ်သင်နောက်တစ်ကြိမ်ငယ်ရွယ်င်ကဲ့သို့ကြှနျုပျတို့ရှိသငျသညျအရလိမ့်မယ်မြင်နေစတင်ရန်ရှာနေရှိမရှိ။
ထက်ပိုမို2လူဦးရေသန်း join တော်မူသောငါတို့၏ရူပါရုံကိုကုထုံး app ကို download လုပ်နဲ့လာမယ့်အဆင့်အထိသင်၏မျက်စိစောင့်ရှောက်မှုရွှေ့ကြပါပြီ။
Vision ၏လေ့ကျင့်ရေး နှင့် နေ့စဉ်မျက်စိလေ့ကျင့်ခန်း တဦးတည်းချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့်ပျော်စရာအထုပ်ထဲမှာ။ မျက်စိစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများ၏အကူအညီဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိလေ့ကျင့်ခန်းမျက်လုံးပညာရပ်ဆိုင်ရာအတွက်အများဆုံးသက်သေပြနည်းစနစ်အပေါ်အခြေခံထားတယ်နှင့်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်, သငျသညျကမ်ဘာပိုကောင်းမြင်နေရဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေး algorithms အသုံးချ!
• 50 + လေ့ကျင့်ခန်း - အရည်အသွေးမြင့်မားမျက်စိလေ့ကျင့်ခန်း၏အကြီးမားဆုံးဒေတာဘေ့စ
•မျက်စိအပန်းဖြေခြောက်သွေ့မျက်စိ, ပျင်းရိမျက်စိနှင့်အခြားအခြေအနေများအဘို့အ 10 လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစား
•သင် fit ကြောင်း7လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များ
• 8 ဘုံမျက်စိရောဂါများပြဿနာတွေနဲ့ပထမဦးဆုံးအကူအညီတွေအကြောင်းသင့်ရဲ့အသိပညာကိုစစ်ဆေး quizzes
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ယူမှု & သိပ္ပံအပိုင်းနှင့်တကွကြွလာ
•နေ့စဉ်အကြံပေးချက်များ & မျက်စိဖြစ်ရပ်မှန်များ
•ကျန်းမာရေးချက်ပြုတ်နည်းများ & အာဟာရအချက်အလက်များ
• Q & certified ရရှိထားပြီးမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်နှင့်အတူအမျှ
မျက်စိကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. •အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရောဂါများ, သင်တန်းများ, etc
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုယခု Download အများအပြားမျက်စိပြဿနာများပိုမိုကောင်းမွန်မျက်စိကျန်းမာရေးနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအာမခံပါသည်။
- သတင်းကောင်း! သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့အစီရင်ခံတင်ပြသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် အခြေခံ. ကျနော်တို့ပိုကောင်းဖျော်ဖြေဖို့မျက်လုံးပြုစုစောင့်ရှောက်မှု Plus အားမြှင့်တင်ရန်ပွီ!
မျက်စိလေ့ကျင့်မှု - မျက်လုံးပြုစုစောင့်ရှောက်မှု Plus အား
21.34 ကို MB